Lasopy “Chou fleur” sy karaoty
Mampihena ny tahan’ny siramamy ny “chou fleur”. Manankarena sira minelaly izy, antony mahatonga azy ho tafiditra ao anatin’ny sokajin’ireo legioma manatsara ny tatavia. Ny karaoty kosa dia mandoro ny tavy.
Mila : “chou fleur” 1 + karaoty 400 g + tongolo be 1 + cumin 1 sotrokely + Kioba fanome tsiro hanitra legioma 1 + sira + dipoavatra
Diovina tsara ny “chou fleur”. Diovina toy izany koa ny karaoty ary voasana sy tetehina ho boribory manify. Voasana ny tongolo be ary zaraina 4. Araraka ao anaty vilany ny rano 1,5 litatra ary arotsaka ao ny tongolo be sy ny kioba. Avelao hangotraka. Raha efa izay dia arotsaka ny legioma voatetika sy ny “cumin”. Ahena ny afo saingy andrasana 20 minitra vao bataina eo ambony fatana ny nahandro. Potsehina ao anaty “mixer” izy rehetra. Asiana sira sy dipoavatra. Aroso mafana tsara.
Lasopy voatavo sy menaka oliva
Ivon-toeran’ny sira mineraly fa indrindra ny potasiôma sy ny vitamina A ny voatavo. Noho izy somary mahavoky dia tsy ahatsiarovana hanoanana mihitsy, aorian’ny fihinana azy.
Mila : Voatavo antsasany + Karaoty 2 + Tongolo be 1 + Menaka oliva 1 sotro fihinanana + Kioba fanome tsiro hanitra legioma 1 + Sira sy dipoavatra.
Rehefa voavaofy sy voadio tsara ny voatavo dia tetehina madinidinika. Tetehina boribory ihany koa ny karaoty voavaofy sy voadio. Voasana ary tetehina manify ny tongolo be. Etsy an-daniny, afanaina ao anaty kaserôly ny menaka oliva ka endandasina ao ny tongolo. Raha efa izay dia arotsaka indray ny legioma, rarahana rano mandifotra azy sy ilay kioba hanitra legioma dia avelao hangotraka. Rehefa mivadibadika izany dia ahena ny afo ary ketrehina mandritra ny 20 minitra. Dila ny fotoana dia potsehina ao anaty “mixer” miaraka amin’ny ranony. Asiana sira sy dipoavatra dia aroso mafana tsara.